Federaaleynta Dalka – UPD – Midowga Nabadda & Horumarka
November 3, 2017 by UPD Party
Xisbiga UPD wuxuu rumeysan yahay in federaaleynta Soomaaliya ay tahay arrin dastuuri ah, loona baahan yahay in, sida dastuurku qabo, la baahiyo xukunka iyo awoodda. Baahintaasina waa inaysan ku sinnaan caasimadaha dowlad goboleedyada, ee waa in degmo walba la gaarsiiyo xukunka, loona madax banneeyo inay hoggaankeeda soo doorato. Xisbiga UPD wuxuu qabaa in federaaleyntu ay tahay nidaam maamul oo ay Soomaalidu ku heshiisay, inkastoo loo baahan yahay in si dhiifoon loo hirgaliyo. Ha yeeshee, waa in federaaleyntu aysan muwaadinka Soomaaliga ah ka hor istaagin xuquuqdiisa muwaadinnimo ee aasaasiga ah sida: inuu gobolkuu doono ku noolaado, wax ka doorto, lagana doorto. Qaabka hadda loo hirgalinayo federaaleynta, oo ah mid sii xoojineysa qabyaaladda iyo goofeysiga, mana ahan mid waafaqsan ahdaafta dastuurka iyo dhaqanka suubban ee Diinta Islaamka.
Xisbiga UPD wuxuu qabaa in udub-dhexaadka federaaleyntu ay yihiin qodobbadan:
In muwaadinka Soomaaliyeed uu si toos ah u dooran karo xisbiga ama qofka uu doono, iyadoo aysan cid kale ka dallaalin.
In muwaadin walba uu meesha ugu dhow ka heli karo adeegyada aasaasiga ah ee dowladnimada, sida caafimaadka, waxbarashada, kaabayaasha dhaqaale, aqoonsiga shakhsiga, fursadaha qandaraasyada, shaqooyinka, iyo wixii lamid ah
In muwaadinka uu haysto xorriyadaha ku cad dastuurka, oo ay ugu horreeyaan kuwa xorriyatul qowlka, xorriyadda kulanka iyo abaabulka sharciyeysan, dowladduna aysan cabburin shacabka, gaar ahaan warbaahinta
In sarreynta sharciga (rule of law) ay hirgasho, oo muwaadiniintu u siman yihiin garsoorka, isla markaana nidaamka cadaaladda uu ku sifoobo hufnaan, karti iyo dhexdhexaadnimo.